Allgedo.com » 2012 » October » 24
Home » Archive Daily October 24th, 2012
Qaraxyo Ciidamada dowlada lagula eegtay Balcad iyo Shalaanbood
Wararka ka imaanaya qeybo kamid ah gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in goordhow oo maanta ay qaraxyo lala beegsaday ciidamo katirsan kuwa dowlada Soomaaliya. Qaraxyadan ayaa waxaa ay si gaar ah kaga dhaceen degmooyinka Balcad iyo Shalaanbood ee gobolka Sh/Hoose. Dad lasoo hadlay AOL ayaa usheegay in ciidamada dowlada qarax xoogan lagula eegtay Magaaladda Balcad, waxaana halkaas ka dhashay dhimashada...
Xaflad lagu taageerayo Ra’isal wasaaraha Somalia Dr. Cabdi Faarax Shirdoon oo October 27 ka dhaceysa magaalada Odense ee Dalka Denmark.
70 Ruux oo ay ku jirto Hogaamiye Shabaab ah oo lagu qabtay Kismaayo
Howlgalo ay ciidamada Kenya iyo kuwa dowlada Soomaaliya ka sameeyeen Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa lagu soo qabtay dagaalyahano katirsan Kooxda Shabaab. Sida uu sheegay Afhayeenka ciidamada Militeriga Kenya Cyrus Aguna howlgalo guri guri loogu baarayay Kismaayo ayaa waxaa lagu soo qabtay 72 ruux. Dadka lasoo qabtay waxaa ku jirta Haweenay lasheegay in ay ahayd Hogaamiye katirsan...
Dagaal ka dhacay gobolka Sh/hoose “Faah Faahin”
Wararka naga soo gaaraya gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in ay maanta ka dhaceen dagaalo xooggan. Dagaalkan oo ahaa mid xooggan ayaa Al-Shabaab iyo coodamada dowlada oo kaashanaya Amisom ku dhrxmatay deegaanka Leego. Lama Oga qasaaraha kadhashay dagaalkan, hase ahaatee goob joogayaal ayaa AOL usheegay in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac. Saraakiil katirsan ciidamada dowlada...
Saraakiil ka socota Nato oo Kismaayo kasoo dagtay
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay oo aynu ka helnay Magaaladda Kismaayo waxaa halkaas gaaray ciidamo ajaanib ah. Ciidamadan oo katirsan kuwa Nato ee kusugnaa biyaha Soomaaliya ayaa kasoo dagtay dekadda Magaaladda Kismaayo. Dad la rumaysan karo oo Kismaayo kusugan ayaa AOL usheegay in saraakiil sar sare oo Nato ah ay kusugan yihiin gudaha magaaladda, kulamana ay la qaadanayaan taliska Amisom...
Labo haweeen oo loo aqoonsaday shaqsiyaadka ugu mushaarka yar Caalamka aadna loola yaabay
Haweenkan oo lagu kala magacaabo Akku iyo Leela Sherigar oo ay da’doodu tahay ilaa 59 sano jir ayaa mudo ku dhaw 42 sano ka shaqaynayay naadafada musqulaha. Akku iyo leela ayaa ah dad shaqanayay sedex saacadood maalinta isbuuca dhan. Waxay mushaar ahaaan u qaadanayeeen mudaas dheer bil walba lacag dhan 15 rubi oo ah lacag aan marnaba sarifmeeenin markii la damco in la sarifo. Balse labadaan...
Dagaal ka dhacay Magaaladda Kismaayo iyo xaaladda sakaay
Dagaal xooggan ayaa Al-Shabaab iyo ciidamada huwanta ah ku dhexmaray xalay Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Dagaalkan ayaa ka danbeeyay kadib markii ciidamada Shabaab ay weerar xoogan ku qaaden farisimo ay ciidamada kenya iyo kuwa dowlada gudaha Magaaladda ku leeyihiin. Lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan ka dhacay gudaha Magaaladda., waxaana uu noqonayaa dagaalkii ugu...
Xildhibaano barlamaanka oo saakay Miisaaniyada ka doodaya
Xildhibaanada barlamaanka dowlada Soomaaliya ayaa saakay kulan ku leh xarunta golaha iyadoo ka doodaya Miisaaniyadii uu soo gudbiyay Wasiirka Maaliyada. Xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo ka mid ah Xogheynada Baarlamaanka ayaa xildhibaanada ugu yeeray in ay kasoo qeyb galaan kalfadhiga barlamaanka. Mudanayaasha barlamaanka ayaa horey loogu qeybiyay nuqulada miisaaniyada sedexda bil ee soo aadan. Waxaana...
Sakeriye iyo Cabdiweli u Gargaar Waa Laba Wiil oo ku Xanuunsan Magaalada Muqdisho
Labadan Wiil ee Caruurta ah ee ku xanuunsan in mudo ahba Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Cabdiweli Xuseen Suldaan Cabdi oo 3 Sano jir ah iyo Sakariye Yacquub Cabdi, da’diisana waa 3 sano jir, labadan Wiil oo isku qoys ka soo jeeda ayaa mudo sanad ka badanba waxaa haya Cuduro ay ka mid yihiin Pralass iyo Xanuunka Nerfayaasha ah ilaa labo Sanabo hayey. Cudurada haya labadan...